Isiqingatha salabo bafunda eli nqaku bazalwa benobuchwepheshe ezandleni zabo, bajwayele ukuguqulwa kwedijithali njengenyaniso. Kwesinye isiqingatha ngabo kuthi babone ukuba ixesha lekhompyuter lafika njani ngaphandle kokucela imvume;…
Udliwano-ndlebe lwe-Geofumadas eSingapore kunye no-Eric Chong, uMongameli kunye ne-CEO, i-Siemens Ltd. I-Siemens inceda njani ihlabathi ukuba libe nezixeko ezihlakaniphile? Yeyiphi iminikelo yakho engundoqo ekuvumela oku? Izixeko zijongene nemingeni ngenxa yeenguqu eziziswe…
Siphila kumzuzu okhethekileyo ekudibaneni kwezifundo eziye zahlulwa iminyaka. Uvavanyo, uyilo loyilo, umzobo wemigca, uyilo lolwakhiwo, ucwangciso, ulwakhiwo, ukuthengisa. Ukunika umzekelo wezinto ebezihamba ngokwemveli; Umgca weeprojekthi ezilula, eziphindaphindayo...
Ukubaluleka kokunciphisa abalamli kulawulo lobhaliso- eCadastre
Kwintetho yam yakutshanje kwiSemina kwi-Advances kwi-Multipurpose Cadastre eLatin America, eyayibanjelwe e-Bogotá, ndigxininise ekugxininiseni ukubaluleka kokubeka ummi kwiziko leenzuzo zeenkqubo zokuphucula. Ukhankanye...
Ndinedatha yeLiDAR - ngoku kuza kwenzeka ntoni?
Kwinqaku elinomdla kakhulu elipapashwe kutshanje nguDavid Mckittrick, apho ethetha malunga nemiphumo yolwazi olwaneleyo lweendlela ezihambelana nokusebenza kunye ne-LiDAR kwi-GIS kunye nokubhekisela kwi-Global Mapper njengesixhobo senkxaso...
IiNkqubo zoLwazi lweJografi: iividiyo ezingama-30 zemfundo
I-intrinsic geolocation phantse kuyo yonke into esiyenzayo, sisebenzisa izixhobo zombane, yenze umba we-GIS ungxamiseke ngakumbi ukuba usebenze yonke imihla. Kwiminyaka engama-30 eyadlulayo, ukuthetha ngolungelelwaniso, indlela okanye imephu yayingumcimbi…
U-Twitter uze endaweni yokubeka iliso ebesisoloko sikwenza ngokutya kwesintu. Kuyathandabuzeka ukuba kutheni le nto yenzekile, kodwa mhlawumbi esinye isizathu kukusebenza kweendaba ezivela kwiifowuni eziphathwayo kunye nokwenzeka…
Izibikezelo ze-2014 zesimo se-geofumed: uPaul Ramsey
Ukuqala ngoJanuwari, uPaul Ramsey wakhulula izibikezelo zakhe kulo nyaka kwintsimi ye-geospatial; kuthathelwa ingqalelo ukuba ngumntu obekule meko iminyaka engaphezu kwe-10 kwaye ngenxa yegalelo labo…
Yiyiphi i geomat kufuneka ikwazi malunga nomgangatho we-LADM wolawulo lomhlaba
Umgangatho wolawulo lomhlaba (Land Administration Domain Model) waziwa ngokuba yi-LADM, ekwazile ukuba yi-ISO 19152 ukususela ngo-2012. Ayisiyo-software, kodwa imodeli yengqiqo echaza ubudlelwane phakathi...
2014-Uqikelelo olufutshane lomxholo weGeo
Lifikile ixesha lokuvala eli phepha, kwaye njengoko kusenzeka kwisiko labo kuthi bavala imijikelo yonyaka, ndiphosa imigca embalwa yoko sinokukulindela ngo-2014. Siza kuthetha ngakumbi kamva, kodwa namhlanje, kunyaka ophelile:…
Phantse ileta yokugqibela eya kwabo ndisebenzisana nabo ... andishiyanga
Kwiintsuku nje ezilishumi ezidlulileyo namhlanje, njengoko usazi, ndiyekile ukusayina amaphepha anxulumene neprojekthi eyandigcina ndixakekile kwaye yandikhuthaza iminyaka esixhenxe. Ngokuqinisekileyo baya kuba belinde ingcaciso, kuba bambalwa kakhulu ...
Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Kanye xa i-nostalgia yokutshintsha umxholo iqala ukuqala ... Ndabelana ngenye yezona zinto zibalaseleyo zokuvalelisa endizibonileyo komnye wabacebisi bam. Njengoko ndingafuni ukukufaka kwimeyile ngokubanzi nakwiziko…
UkuPhathwa koMhlaba: indlela ye-LGAF
Yaziwa ngokuba yi-LGAF, indlela yokusebenza ethi ngeSpanish yaziwa ngokuba yiNkqubo-sikhokelo yoVavanyo loLawulo loMhlaba. Esi sisixhobo esenziwa kuso ukuxilongwa kwemeko esemthethweni yelizwe, kwi…
Iimpawu ezibalulekileyo ze4 kwimbali yeGeofumadas
-Kufuneka sibe nebhlog… Umphathi wam (HM) uthe, engakhange ajonge kweli hlabathi. Ndaziva ndineentloni ngokungazi igama elakhankanywa yindoda eneminyaka engama-73 ubudala ngaphambi kwesikhalazo sam esinenkani malunga nesizathu sokuba bandiqhawule...
Ukubandakanywa komba wentlalo kwiinkqubo zoqeqesho lobugcisa
Kule veki bendithetha nomnye wogxa bam, kwaye senze imbali malunga nengwevu esiziswe yile minyaka kwezi nkqubo zophuhliso -ngaphezu kowam kunalowo uxhasa inkqayi yakhe-. Wachaza indlela i-evolution...
I-radiography ekhawulezayo yamaGofumadas ngaphezu kweenyanga ze-75
Emva konyaka kunye nesiqingatha sokuzimela phantsi kwesizinda seGeofumadas.com, sifikelele ngaphezu kwe-70,000 yokutyelela ngenyanga. Kuninzi kakhulu kwaye kwabo balandele le ndawo ukusukela kwimvelaphi yayo, baya kubona ukuba ngokuhamba kwexesha zimbalwa izinto…
Ungazi njani ii Geofumadas
I-Geofumadas ikhona ukususela kwi-2007, ngaphezu kwamanqaku e-1,200 asikhokelele kwi-100,000 ukutyelela ngenyanga ngokuqala ukusuka ekuqaleni ukususela ngoJanuwari 2011 ukuba sifudukele kwi-Geofumadas.com. Amaxesha okuhlaziya ayohluka, ukusuka...
Ukugcwala kolwimi lwaseSpain, usuku lokuntywila kwiZ! Izithuba
Le grafu ilandelayo yisampulu ethathwe kolunye lweentsuku ezinezithuthi eziphezulu (ngoLwesibini, ngoLwesithathu nangoLwesine ziqhelekile). Ndisebenzisa uLwesithathu njengomzekelo, obonisa umda weendawo ze…